Yakha imephu yonyulo kunye ne-Fusiontables - kwii-10 imizuzu - ii-Geofumadas
Yakha imephu yonyulo kunye ne-Fusiontables - kwi-10 imizuzu
NgoDisemba, 2013 Google umhlaba / imephu
Makhe sicinge ukuba sifuna ukubonakalisa kwimephu, iziphumo zonyulo zoomasipala, ukwenzela ukuba bahlaziywe ngumbutho wezopolitiko kwaye babelane noluntu. Nangona kukho iindlela ezingaphantsi kweendlela zokwenza izinto, ndifuna ukubonisa umzekelo ukuchaza indlela enokuyenza ngayo nge-FusionTables ngumsebenzisi oqhelekileyo.
Isiphumo esishicilelweyo seNkundla yeNyulo ephakamileyo, apho unokubona uluhlu ngumasipala.
IMfutshane 1. Yakha itafile
Oku kwenziwa ngokukopisha nokudlulela kwitafile ezifumaneka kwiNkundla yeNyulo ephakamileyo kwi-Excel. Ukukopishwa okukhethekileyo kusetyenziswa, kuphela umbhalo kwaye kungabonakali kwelizwe, kufuneka uhlinele kwiSebe le-18 nganye. Inzuzo nge-Chrome kukuba ukhetho luyenziwe, nokuba sitshintshela icebo ukuze senze kuphela uCtrl + C.
Sishiya sihloko sisodwa kumqolo wokuqala.
Ekubeni itafile ayinalo ulungelelwaniso, kuya kubakho ukulungelelanisa ukusebenzisa i-geocode. Ukwenza oku, siza kufaka iikholomu ukwenzela ukuba i-Google ingadideki xa ifuna indawo; Sifuna ukuba ukhangele umasipala, isebe, ilizwe.
Kwikholam F, siza kusebenzisa ifomati engumzekelo njengale: = UKUQHATHISWA (Ikholomu kamasipala, ",«,Ikholeji, ",«,»Izwe«), Sikwachulumanisa amakhomenti phakathi kweempawu zocaphuciso ukuqinisekisa ukuba umtya ujongeka ngendlela esilindele ngayo. Ke, ikholamu yomqolo 2 inokubonakala ngolu hlobo:
= QINISEKISA (B2, »,», A2, »,», Honduras ») kwaye ngenxa yoko umqolo uza kuba: kwiCentral District, uFrancisco Morazán, Honduras
Siza kubiza isihloko sale kholamu E "Concatenate"
IMfutshane 5. Indlela yokuyilayisha kwiiFusionTables
I-FusionTables ifakwe kwisiphequluli se-Google Chrome, kwaye xa uyibiza ukuba udale iphepha elitsha kweli qhagamshelo, eli phepha limele livele.
Unokhetha iphepha elifumaneka kwi-Google Spreadsheets, yenze ingenanto okanye ulayishe enye esinakho kukhompyutha.
Nje ukuba ukhethe, khetha iqhosha «elilandelayo". Uza kusibuza ukuba kumqolo wokuqala kukho igama leekholamu, emva koko senze u- "Okulandelayo" emva koko ke uya kusibuza ukuba silinika igama lini na kwitafile kunye neenkcazo ezinokuthi zihlelwe kamva.
IMfutshane 7. Indlela yokuguqula itafile
Kwithebhu yeFayile, khetha "i-Geocode ..." kwaye usibuze ukuba yeyiphi ikholamu equkethe i-geocode. Sibonisa ikholam esiyichaze ngaphambili.
Ukuba besingakhange senze ikholam concatenated, ngesele sichaza umasipala kodwa ngenxa yokuba bekukho amagama amaninzi aphindaphindiweyo kumazwe amaninzi, ngesele sishiya amanqaku asasazeke ngaphandle kweHonduras. Kwakwilizwe elinye kukho oomasipala abanegama elifanayo, umzekelo «iSan Marcos», ukuba besingakhange sivumelane nelisebe besiya kuba nabo obo bunzima.
Kukho ukhetho olubizwa ngokuba "yindawo yeentengiso", ekuthe ngenxa yoko akukho mfuneko kuba ityathanga lonke sele linolwazi lokwenza inqanaba lelizwe.
Inkqubo iqala ukufumana indawo nganye ngokusekelwe kwindlela esichaze ngayo. Ngezantsi ubonisa i-orange ipesenteji yedatha engenangqiqo, okuza kwenzeka rhoqo ngeendawo iGoogle engazange ibone kwiziko ledatha layo; Kwimeko yam ye-298 kuphela i-6 engenakwenzeka; Ngokuqhelekileyo iGoogle ibabeka kwelinye ilizwe kuba zikhona ndawo.
I-Minimum 10, apho unayo
Ukuba indawo iphumile endaweni, ihlelwe ngo- "Row" ukhetho, ucofe kabini ebaleni kwaye kwikhonkco "hlela i-geocode" liphucula ukukhangela kwaye libonisa indawo esombulula ubungqindilili. Ukuba ayikho, ke ungabonisa indawo ekufutshane esibona kuyo iitgi zikaGoogle.
Kukhetho lwefayile, kunokwenzeka ukongeza iipaneli ukuvula, ukucima kunye nokuthunyelwa ngumntu, kwisebe, ngumasipala ... njl
Apha ungabona umzekelo. Ayinayo idatha yokugqibela kuba ndiyenzile ngolwazi olusacutshungulwayo, kwakhona luhambisa ezinye ietafile zenza ukudibanisa nommandla kunye nomasipala wecala ukusuka kwelinye itafile ... kodwa njengomzekelo kukho ikhonkco. Andizange ndenze ukulungiswa kwangaphakathi kwephutha lokuqala kunye nokulinda imizuzu ye-10 ukuba yanele.
Unako ukudibanisa amatafula, ukuhlela ngokuthe ngqo, ukupapasha kunye nezinye izinto ezisisiseko. Ukwenza okungakumbi, kukho i-API.
Ewe, oku kwenziwa ngeendlela.
Ukuba sifuna ukusebenzisa iimilo zamakholomu, sinokusebenzisa isevisi ye-Shapescape (sinethemba ukuba ayinakunyulwa) ... nangona ifuna ngaphezu kwemizuzu ye-10.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GIS Pro I-GIS yesicelo esihle kwi-iPad?
Post Next CartoDB, okungcono ukudala iimephu onlineOkulandelayo "